ट्रेनवेर पाउडर (4642-95-9) हप्लस X98% | AASraw
/ उत्पादन / एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स / Trenavar पाउडर (4642-95-9)
SKU: 4642-95-9. श्रेणी: एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स
AASraw ग्रेनबाट साम्राज्य र उत्पादन क्षमताको साथ टि्रेनवारा पाउडर (4642-95-9) मा ठूलो सीजीएमपी विनियमन र ट्र्याबल योग्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत छ।
Trenavar पाउडर औपचारिक रूपमा एस्ट्रा-4,9,11-triene-3,17-dione को रूपमा भनिन्छ, साथै Trendione र 10 समय अधिक androgenic टेस्टोस्टेरोन भन्दा बढी छ। Trenavar एक प्रोहोरोन हो जुन सक्रिय Trenbolone सिर्जना गर्न 17b-HSD1 मा फोकस हुन्छ, अर्थ भनेको एक पटक तपाईंको शरीर Trenavar मा ट्रेनबोलोन वा टरेनमा बदल्छ।
Trenavar पाउडर भिडियो
Trenavar पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू
नाम: Trenavar पाउडर
आणविक सूत्र: C18H20O2
पिघल प्वाइन्ट: 138-141 ℃
रंग: सेतो वा हल्का पहेंलो क्रिस्टलीय पाउडर
Trenavar पाउडर चक्र
रासायनिक नामहरू: एस्ट्रा-4,9,11-triene-3,17-dione
अन्य नामहरू: ट्रेंडेनईन, ट्रेनबोल, ट्रान्स एलाइट, टी-वर्स 15 र सुपर ट्रेनबोल। आरयू-एक्सएनएक्सएक्स, ट्रेनवा रोपाउडर, ट्रान्सियनईन पाउडर
Trenavar पाउडर उपयोग
Trenavar पाउडर औपचारिक रूपमा एस्ट्रा-4,9,11-त्रिनिन-3,17-dione को रूपमा भनिन्छ, साथै ट्रेन्डेनईन र यो एक्सएनएमक्स टाइम्सोस्टेरोन भन्दा बढी रौतहट हुन्छ। Trenavar कच्चा पाउडर एक प्रोहोरोन हो जुन सक्रिय Trenbolone सिर्जना गर्न 10b-HSD17 मा फोकस हुन्छ, अर्थ भनेको तपाईंको शरीरमा एकपटक त्रेनभर कच्चा पाउडर टर्नबोलोन अका ट्रेनमा बदल्नुहोस्। Trenavar पाउडर प्रयोगकर्ताहरु लाई ठूलो मात्रा मा वृद्धि को साथ मा ठूलो मात्रा मा पनि अनुभव गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरु लाई पनि त्वरित वसा हानि को अनुभव गर्दछ र मांसपेशियों को बढाव को वासकीयता पनि छ। टि्रेनवारा पाउडर यौगिकले निकै लोकप्रियता र माग गरेको छ यसको कारणले यसको चक्रको नतिजालाई छोटो चक्रमा। जब तपाईं ठूलो मात्रा मा प्राप्त र वसा गुमाएका संभावित मात्रा मा विचार गर्दा यो वास्तवमा दुवै संसारको सबैभन्दा राम्रो हो।
Trenavar कच्चा पाउडर, Trendione को रूपमा पनि जान्छ, एक मौखिक प्रोहोरोनोन हो जुन 17th स्थिति मा केवल ketone द्वारा प्रसिद्ध इंजेक्टेबल स्टेरॉइड ट्रेनबोलोन बाट अलग छ। यसैले, यसले शरीरमा सक्रिय टर्नबोलोन उत्पादन गर्दछ, यो एक अत्यन्त शक्तिशाली र शक्तिशाली कम्पाउन्ड बनाउँछ। किनकि संरचनामा यति नै समान हो कि ट्रेनबोलोनमा, अलग खाँसीबाट (जुन सामान्यतया गलतीमा नसमा चोट लाग्ने इन्जेक्शनको परिणाम हो), प्रयोगकर्ताले इंजेक्नेबल टर्नबोलोन प्रयोग गरी धेरै समान परिणामहरू पाउनुपर्दछ।
यो प्रोहोरोन धेरै छिटो-अभिनय हो कि प्रयोगकर्ताहरूले लगत्तै कि उनी7पछि 10 भित्र Trenavar पाउडरको पहिलो खुट्टा पछि परिणाम देख्न सक्षम थिए। यद्यपि, केवल उल्टो मात्र ट्रेनभार कच्चा पाउडरले तपाईको समग्र सहनशीलताको स्तरलाई कम गर्न सक्छ, जसले तपाईंलाई कार्डियो अभ्यासमा लिइरहँदा जब तपाईं वास्तवमा अन्तिम सम्मसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ यो खराब हुन सक्छ।
अहिलेसम्म ट्रेनवेर पाउडर एक अनोखी प्रोहोरोनोनको रुपमा मानिन्छ, यो टिन्डबोलोनसँग धेरै समान गुणहरू साझा गर्दछ, एक इन्जेक्सबल स्टेरॉयड जसले शरीर निर्माण गर्ने संसारमा धेरै अनुयायीहरू पनि पाउँछ। क्या एक दुई देखि एक दुई को अलग गर्दछ तथ्य यो कि पहिले नै 17th स्थिति मा केवल एक केटोन आफ्नो रासायनिक ढाँचा मा पछि देखि।
Trenavar पाउडर को खुराक के छ
धेरै प्रयोगकर्ताहरू 30 को लागि 45 दिनको लागि 30mg Trenavar पाउडर को आसपास चक्र समर्थन संग चल्छ। यो2माथि 3mg को 15 सर्भर माथि यो खुट्टा विभाजित यो सबै भन्दा राम्रो छ।
प्रारम्भिक रूपमा, प्रवृतिलाई 50-70 मिलीग्राम (मिलीग्राम) प्रति दिन विभाजित खुराकमा बन्द गरिएको हुनुपर्छ, र यदि साइड प्रभावहरू उत्पन्न भएन भने, खुट्टा 100mg अधिकतमसम्म बढ्न सकिन्छ। त्यो खुल्ला नाघ्न कुनै आवश्यकता छैन, र यो5वा6हप्ता भन्दा बढीको लागि दौड हुँदैन।
यदि स्ट्याकको भागको रूपमा प्रयोग गरियो भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाइँ चक्रमा किकस्टार्ट गर्न ट्रान्सनियन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ, र प्रति दिन 20-50mg सानो खुट्टा एक अचम्मको रकम हो। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको साथ equipoise, टेस्टोस्टेरोन, वा primobolan स्ट्याक गर्न छनौट गर्छन्। के हो भने, केही प्रयोगकर्ताहरूले डेका पिरोबोलिनसँग प्रवृत्तिलाई पनि स्ट्याक गर्न छनौट गर्छन्, तर ध्यान राख्नुहोस् कि दुई प्रोजेस्टिनहरू स्ट्याक गर्न मात्र धेरै अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूद्वारा मात्र गर्नुपर्छ।
पहिलो पटक प्रवृत्तिका प्रयोग गर्दा, तपाईंले कसरी प्रतिक्रिया देखाउनुभएको न्यूनतम खुट्टामा सोलो चलाउनुपर्छ।
कसरी ट्रेनवारा पाउडर काम गर्दछ
Trenavar कच्चा पाउडरले 17b-HSD1 लक्षित गरी काम गर्दछ र त्यसपछि तपाईंको शरीर भित्र टर्नबोलोनको कन्फिगरेसनलाई हाइड्रोजन गर्दछ। Trenbolone र Trenavar पाउडर धेरै समान छन्, वास्तवमा तिनीहरूले एउटै3भंग भएको डबल बाँड साझा गर्दछ। Trenavar कच्चा पाउडर यस तथ्यमा भिन्न छ कि यसमा एक 17 केटोन छ। परिणामको रूपमा प्रयोगकर्ताहरूले लगभग एकै नतिजा अनुभव गर्दछन् जुन तिनीहरूले टर्नबोलोन चक्र चलाएर गर्दछन्।
प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो खुट्टा पछि 7-10 दिन भित्र हुने हुन सक्ने सुविधाहरू सहित बोर्डमा आफ्नो मांसपेशी जन र बलमा तीव्र वृद्धिको दावी गर्छन्। 4-6 हप्तापछि, बलियो प्रशिक्षण गर्ने अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले भन्नेछन् कि तिनीहरू धेरै लिने वा अधिक छन्, तिनीहरूको लिफ्टहरूमा तिनीहरूको व्यक्तिगत रेकर्डहरू। यसबाहेक, तिनीहरू मांसपेशिहरु लाई ठुलो, ठूलो पंप आफ्नो प्रशिक्षणको समयमा र अधिक संवचनको बारेमा पनि रिपोर्ट गर्दछ।
प्रशिक्षणको सहनशीलता पक्षको सन्दर्भमा, प्रवृत्ति एक गरीब छनौट हो, किनकि यसले तपाईंको सहनशीलता लक्ष्यहरू कमजोर पार्नेछ।
यस्तै फाइदाको अलावा, शरीर निर्माणकर्ताहरूले डुनको सन्दर्भमा यसको सुविधाको लागि ट्रेनवेर पाउडरको लागि पनि जान्छन्। यसको बारेमा सोच्नुहोस्। जब तपाईं वास्तवमा एउटै सामान मौखिक रूपमा लिन सक्नुहुन्छ जब इंजेक्शनको परेशानीमा जानुहुन्छ? यो पनि एक स्ट्यान्डलोन प्रोहोरोनोन वा स्ट्याकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रोहोरोन एकमात्र साधन हो जुन शरीर द्वारा metabolized जब Trenbolone मा परिवर्तित हुन्छ। अब जब त्यहाँ धेरै ट्रेनवार कच्चा पाउडर "क्लोन्स" छन् जुन तपाईं जान सक्नुहुन्छ, यी वास्तवमा डिनोलोनमा बदलिन्छ, जुन तुलनामा धेरै कमजोर छ।
Trenavar पाउडर एक बहुमुखी बहुमुखी छ र सामान्यतया शरीर बिरुवाहरु द्वारा प्रतियोगिता prep को समयमा र मौसम को समयमा प्रयोग गरिन्छ। यस प्रोहोर्मोनको धेरै अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूले यो कम्पाउन्डसँग मात्र राख्नको लागि नचाहने क्षमता पनि छ, तर यी समयहरूमा अतिरिक्त क्यालोरीमा कम-क्यालोरी आहारको साथ प्याकेज पनि सक्षम पार्दछ।
यसबाहेक, ट्रेनवार कच्चा पाउडरले एस्ट्रोजेनमा परिवर्तन गर्दैन र साइकल हुँदा कुनै एस्ट्रोजेनइक साइड इफेक्ट ट्रिगर गर्दैन। तथापि, यो अझै पनि महत्वपूर्ण छ कि तपाईलाई उचित पोस्ट चक्र थेरेपी वा PCT पछि यो साइकलमोनको साथमा कुनै पनि प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू रोक्न पछि साइकल चलाउनु हो।
अहिलेसम्म ट्रेनवार कच्चा पाउडरले एस्ट्रोजेनमा परिवर्तन गर्दैन र एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट ट्रिगर गर्दैन, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ यो प्रोहोरोनको साथ एक उचित पोस्ट चक्र थेरेपी वा PCT पछि साइकल चलाउनु हो। ट्रेनवेर पाउडर धेरै शक्तिशाली छ किनकी, तपाइँका अंगहरू यो प्रोमोरोन प्रसोधन पछि र तपाईंको हार्मोन स्तरको सामान्यता को बढावा दिन पछि पुनरुत्थान गर्न मद्दत गर्न PCT को आवश्यकता हुनेछ।
Trenavar कच्चा पाउडर मार्केटिंग
आगामी भविष्यमा उपलब्ध गराइयो। RU-2065
ट्रेनवेर पाउडरसँग कुनै साइड इफेक्ट छ
कुनै पनि प्रोहोरोन चक्रको समान, प्रयोगकर्ताहरूले रक्तचापमा वृद्धि र माथिल्लो कोलेस्ट्रलमा साइकल चलाएर ट्रेनवियर पाउडरमा वृद्धि देखाउँछन्। अधिकतर अवस्थामा ती चक्र पूरा भएपछि उच्च उच्च रक्तचाप समाप्त हुन्छ र लिभरमा प्रभावहरू चक्र समर्थन र पोस्ट साइकल थेरेपीमा उचित रूपमा अफसेट हुन सक्छ। ट्रेनवेर पाउडरले आक्रामकता बढाउन सक्छ र अस्थायी रूपमा लिबियालाई कम गर्न सक्छ। सुसमाचार यो हो कि Trenavar कच्चे पाउडर को बढावा नहीं गर्दछ जिसका अर्थ यो एस्ट्रोजन मा परिवर्तित नहीं हुनेछ। त्यसैले तपाईं Gyno अका मानव स्तन को विकास को बारे मा चिंतित छैन।
Trenavar पाउडर सामान्यतया तपाईंको थाइरोइड स्तर कम गर्नेछ जसले प्रोल्क्टिनको उत्पादनलाई ट्रिगर गर्दछ। अत्यधिक प्रोलैक्टिन उत्पादन निपल क्षेत्र मा संवेदनशीलता, puffiness, र जीवाणु नेतृत्व गर्न सक्छ। यी प्रकारको साइड इफेक्टहरू रोक्न, तपाईंको चक्रको समयमा प्रोटलैक्टिन इन्स्टिटर प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै इन्न्टिट-पी एसएनएस वा ब्ल्याक लायन रिसर्च द्वारा प्रोलिक्ट्रोन।
जो "टर्ने खाँसी" संग परिचित हो कि आवश्यकता को बारे मा चिंता गर्दैन कि जब साइकल ट्रेनिंग ट्रेनवियर कच्चा पाउडर इंजेक्शनबल को एक मात्र प्रभाव हो। यो अब एक चिन्ता छैन किनकि Trenavar कच्चा पाउडर उत्पादन मौलिक रूपमा लिइन्छ।
Trenavar पाउडर एक गैर-मेथाइलित प्रोहोरोन हो जसको अर्थ यो शरीरमा कठोर जस्तो छैन, तर यसको अर्थ भनेको तपाईं चक्र समर्थन नगर्नु हुँदैन। कुनै प्रोहोरोन चक्रको साथ चक्र समर्थन आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, निम्न साइड इफेक्टहरू प्रयोगकर्ताहरु द्वारा रिपोर्ट गरिएको छ जुन पहिल्यै ट्रेनवार कच्चा पाउडर संग चक्र गरिएको छ:
खुट्टामा टाउको दुखाइ र दुखाइ हुन सक्छ
थाइरोइड स्तर घटाउँछ
रक्त शर्कराको स्तरमा डुब्न सक्छ
प्रोलक्टिन उठाउन सक्छ
सहनशीलताको स्तर घटाउँदछ
खराब कोलेस्ट्रॉल र रक्तचापको स्तरमा सर्जन हुन सक्छ
हृदय र लिभरमा तनाव ल्याउन सक्छ
अनिद्रा, थकान र लापरवाहीको बट्टाहरू हुन सक्छ
यद्यपि त्यहाँ केही खाताहरू छन् जुन ट्रेनवेर पाउडरलाई जोड दिन्छ "तीर खाँसी", यसले यो प्रोहोरोन प्रयोग गर्दा केहि गर्न सक्दैन। इंजेक्शन योग्य ट्रेनबोलोन प्रयोग गर्दा तपाईं मात्र अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ
AASraw देखि Trenavar पाउडर कसरि किन्नुहोस
Trenavar कच्चे पाउडर व्यंजनहरू
तपाईंको सन्दर्भको लागि हाम्रो ग्राहक प्रतिनिधि (सीएसआर) को जानकारी को लागी
नन्द्रोलोन लौरटे पाउडर
फैट हानि पाउडर (13)
नान्ड्रोलेन अज्ञात पाउडर
बर्टेजोमब पाउडर (179324-69-7)
प्रतिलिपि अधिकार - 2019 AASraw सबै अधिकार सुरक्षित।